Waini 3.0 RC1 ichave yakagadzirira munguva pfupi | Linux Vakapindwa muropa
Isu tinoziva kuti chirongwa chakakurumbira cheWine, hongu, iyo inoshandisa inoenderana layer kuti ikwanise kuisa yemuno Microsoft Windows software pane Unix-senge inoshanda masystem inoenderera mberi nekusimba kwazvo. Uye zvakare, iyo vhezheni Waini 3.0 RC1 ichave iri pachena mumazuva mashoma. Pamwe musi wa8 ichave yakagadzirira sezvo isu takakwanisa kuziva uye nekutenda kune izvo zvakaziviswa naAlexandre Julliard zvinoenderana nezvirongwa zvakapihwa waini 3.0 munzira yake.
Icho chiri pamusoro wekutanga kuburitswa mumiriri (Sunungura Musarudzo 1) yeiyo nyowani Wine vhezheni 3.0 kuti tikwanise kuyedza zvimwe zvitsva izvo Waini ichaita. Asi zvinoenderana nemugadziri uyu, chirongwa ichi mushanduro yayo 3.0 hachizosvika pakukura kwayo, ndiko kuti, vhezheni yekupedzisira, kweanenge mana kana matanhatu mamwe mavhiki. Saka kana zvirizvo, hatizoone Waini 4 Yekupedzisira kusvika kutanga kusvika pakati paNdira. Kuti chero bedzi pasina matambudziko ekupedzisira anowanikwa anononoka kutanga ...
Kubva iyo Vini 2.0.x vhezheni, makumi maviri neshanu aburitswa aburitswa kuti anzwisise kuvandudzwa kweWinde 22 ine akawanda anonakidza maficha maficha uye kuwanda kwakawanda pamusoro peshanduro dzakapfuura. Pakati pezvinhu zvitsva zvinonakidza tine kuvandudza kwekuita kwemitambo yemavhidhiyo yakavakirwa paDirect3.0D API, pamwe nekuwanda kwemifananidzo yekufungidzira uye kugadzirisa mukutsigira Direct3D 11, inatsiridzwa rutsigiro rweDPI, kugadzirisa mukutsigira Windows 7 kunyorera, kugadzirisa kweDirect 2D, nezvimwe. Uye munguva pfupi iri kutevera DX12 uye Vulkan !!!
Uye kune zvese izvo isu zvatinofanirwa kuwedzera rakasimba basa rekugadzirisa zvikanganiso, zvakajairika kugadziridzwa kweanenge aripo mashandiro uye pamusoro pezvose chakanyanya kukosha chinhu: kushanda neApple. Isu takatozivisa kubva kuLxA kuti Waini 3.0 haingori chete inoenderana neyekuzvarwa Microsoft Windows software, asi zvakare inounza kugona kuisa emuno mafomu kubva kuGoogle's Android system. Izvo zvinosiya yakawanda yekutamba kuti ikwanise kuisa ese maapplication anowanikwa muiyo Play Store, kusanganisira Microsft Hofisi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Waini 3.0 RC1 ichave yakagadzirira munguva pfupi
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Deepin OS